Email Kushambadzira neNhamba | Martech Zone
Email Kushambadzira neNhamba
Mugovera, March 10, 2007 Mugovera, October 20, 2018 Douglas Karr
Shamwari yangu yakanaka, Chris Bagott, ave kuda kuburitsa bhuku rake rekutanga, Email Kushambadzira Nenhamba. Chris akanyora bhuku riine Ali Sales, imwe shamwari yangu.
Chris ndiye wekutanga naye mu ExactTarget, iyo kambani yandinoshandira nayo seManeja Chigadzirwa. Chris 'blog (pamwe nevamwe vatungamiriri vanoshamisa nevashandi) vakasundira ExactTarget mu stratosphere - akatumidza imwe yemakambani mazana mashanu anowedzera kukura eInc munyika.
Kwete chete ini ndakave nemufaro wekushanda naChris kuExactTarget, ndiri kukwikwidza mubhuku rake - kutaura kune otomatiki uye kusangana. Ndiri kutarisira kuverenga bhuku pamwe nekunakidzwa kwekuzviona ndiri kudhindwa! Ndakanyorera uye ndanga ndiri mumagazini, asi handina bhuku. Chaizvoizvo chakandisundidzira kuti nditange kunyora pachangu, ini ndine angangoita mapeji 75 pane izvo zvandakadzidza mugore rangu rekutanga rekubloga. Ndinofanira kudzokera kwairi, zvakadaro!
Chris ari kutangawo kambani yake inotevera, Compendium Software. Ndakave nemufaro wekushanda naChris pakutangisa uku futi - takapedza akawanda manheru tichitaura nekusanzwisisika kusanzwisisika kwekubloga mushandisi nzvimbo uye kusakwanisa kwevaverengi kuti vakwanise kuwana zvirimo zviri nyore. Iwe uchaona Kumanikidzwa pamepu munguva pfupi iri kuita izvo chaizvo! Ini handidi kurega zvakanyanya pabhegi pariri, asi ndinofara kuona chiratidzo chaChris chichiitika seicho ExactTarget akaita. Chris ari kushanda kuCompendium yakazara-nguva izvozvi. Ndine mwanakomana ari kuenda kukoreji, saka ndaifanira kusarudza nzira yakachengeteka uye kunamatira nekambani iri kuputika kare!
Pre-odha yako kopi yeemail Kushambadzira neNhamba! Email ichiri inoshamisa tekinoroji nematoni akawanda chipikirwa. Kusiyana nechero imwe tekinoroji, email yemvumo-ichiri pamberi pekushambadzira kwe 'Push'. Ndokunge, iwe wakandipa mvumo yekutaura newe, uye ini ndinokwanisa kusundira iko kutaurirana kwauri pandinenge ndichida. Terevhizheni, Radio, Mapepanhau, RSS uchine kuvimba kukuru kune mutengi, mutengi kana tarisiro 'yekuisa mukati'. Email yakura kuita chikamu chehupenyu hwezuva nezuva kwatiri (ini handizive zvandakaita pamberi peemail!) Uye ndicharamba ndichigara nenzira iyoyo.
Ini handigoni kumirira kuti nditore kopi yebhuku racho! Uye zvirinani kuve autographed, Chris!
Tags: chris bagottEmail Marketingemail bhuku rekushambadziraemail kushambadzira nenhamba
Technorati Chinzvimbo WordPress Plugin Shanduro 2 Yakaburitswa!
SOAP'd: Kwesva Mumwe Chirongwa
Mar 26, 2007 pa 2: 17 PM
Ndawana saiti yako nekutsvaga bhuku iri; ) Zvinoita sekunge zvingave zvakakodzera kuti utariswe.
Mar 26, 2007 pa 6: 15 PM
Ndovimba kudaro! Chris murume akanaka uye muevhangeri weEmail uyo akapa simba reEmail pasi rese kwemakore mashanu apfuura. Zano rake rinopupurirwa uye kumberi. Email inotariswa zvishoma senge "nezuro" tekinoroji asi hapana chimwe kunze. Vatengesi vari kuwana kubatanidzwa kweemail, mapeji ekumhara, kukonzeresa kutumira, nezvimwe vari kutyaira yakawanda uye yakawanda traffic uye mari kumasaiti avo.
Apr 11, 2007 pa 2: 10 PM
ndinobvumirana nazvo. Usamborerutsa simba reiyo email yakaiswa zvakanaka kune kaviri-opt in subscriber list.
Apr 27, 2007 pa 8: 49 AM
IRI ibhuku rakakura uye ruzha rwatanga kutenderedza mudenderedzwa redu muAtlanta. Doug, zvakanaka kuwana bhurogi rako uye zvishuwo zvakanakisa kwauri, Chris uye vatungamiriri vepfungwa paChaizvo Target uye Compendium. Dzokera zasi kuAtlanta uye uwane nyama yenyama neni imwe nguva! Scott
Apr 27, 2007 pa 9: 20 AM
Zvakanaka kunzwa kubva kwauri uye ndinofara kuti wakandiwana! Ndinotarisira kusangana newe zvakare munguva pfupi.
Kune vanhu vasingazivi: Tsanangudzo6 ndomumwe wemapiyona ekusimudzira tekinoroji muKushambadzira. Dai paine kambani imwe chete yandakashanda nayo yainzwisisa kushambadzira-yepakati kushambadzira, otomatiki, uye kugona kukwidziridza masimba echimwe nechimwe, iDefinition6.
Scott nechikwata vatungamiriri vepfungwa vakakwana muindasitiri iyi. Ndakava nemufaro wekuenda kunodya naMichael Kogon (CEO) naScott humwe husiku uye kwaiva kufema kwemhepo. Ndakabhururuka kubva muAtlanta mune ruzha, ndiri mupenyu nemazano uye ndinofara kudzoka mukuvandudza chigadzirwa chedu.
Microsoft yakaziva Definition6 kakawanda nekuda kwehungwaru uye hunyanzvi hwavo. It's a incredible team! Kana isu tikatarisa ku 'Agency yeRamangwana', ndinofunga Definition6 yatove muenzaniso wakanaka!
Ndatenda nekumira nekundizivisa kuti wanga uri pano, Scott!